မောင်ဘုန်း January 7, 2012 at 9:05 PM
ဘုရား ..ဘုရား တစ်ပန်းကန်မကုန် သေးဘူး .. နောက်တစ်ပန်းကန် ထပ်ယူ မို့စဉ်းစား နေပြီ တဲ့ ....
camomilla January 7, 2012 at 9:28 PM
kztk January 7, 2012 at 9:42 PM
သမီးစံတို့ကတော့နော်... တဂ်စာကို ကိုယ်တိုင်စားပြီး အေးအေးဆေးဆေး အိပ်တာ မဟုတ်ပဲ သူများတွေကို လိုက်ကျွေးနေသေးတယ်နော်။ သူများတွေများဖြင့် တဂ်စာ စားဖို့ နေနေသာသာသာ ပုဇွန်ဟင်းနဲ့ငါးသလောက်နဲ့ပဲ စားနေရပါတယ်ဆိုမှပဲနော်....ဟွန်း...... :P
ကျွေးတဲ့သူ ရှိတော့လည်း စားရအုံးမှာပေါ့နော်.....
jasmine(တောင်ကြီး) January 7, 2012 at 9:59 PM
chocolatecupidlay January 7, 2012 at 10:28 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 7, 2012 at 11:32 PM
သမီးစံ စိတ်ညစ်ရင် သွားတဲ့နေရာလေး သွားချင်သာ... အေးချမ်းလိုက်ပါဘိ...
နောက်တစ်ခါသွားရင် ခေါ်နော် ...သမီးစံ ..:):)
တွတ်တွတ် January 7, 2012 at 11:59 PM
လမင်းငယ် January 8, 2012 at 12:26 AM
blackroze January 8, 2012 at 1:15 AM
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် 1/ 2012
ွှအကြောင်းအရာ ။။ ။။ရာထူးတိုးမြင့်ပေးခြင်း
CIA ငှာနချုပ် မှ.. အကြီးအကဲ jerry pigpg -007
jerry pigpig -007
ဖွဘုတ်တွင် များများဖွရေး ငှာနခွဲ )
CIA ငှာနချုပ် ။။ ။။။
အလင်းသစ် January 8, 2012 at 2:39 AM
ရေကူးတာနဲ့ အသားက မမဲပါဘူးညီမလေးရ.. ကူးသာကူး...
မဲတာကနေ ပြာသွားတော့ရော ဘာဖြစ်သေးတုန်းနော.. :P :P
san htun January 8, 2012 at 3:13 AM
သမံစီးရဲ့အပေါ်စီးကပုံလေးကြည့်ပြီး အပေါ်စီးချင်သွားတယ်..:P
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) January 8, 2012 at 3:39 AM
စိတ်ညစ်တဲ့အခါ တံတားပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ ခုန်ချဖို့တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။း)
Anonymous January 8, 2012 at 3:52 AM
အောက်ဆုံးပုံကအတော်မိုက်တယ်ကွာ ကြွေကြမြေခလောက်တဲ့ရိုက်ချင်ပဲ လူကဂှုပ်နေလို့ လူမပါရင်ပိုလှမှာနော်..ကင်မရာ Idea ယူတာမိုက်တာ
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် January 8, 2012 at 10:09 AM
နာ့သမီးလေး ပုံတွေအရမ်းမပြနဲ့ ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရိုက်ပွဲဖြစ်ကုန်မယ်
ဘိုဖြူ January 8, 2012 at 4:16 PM
rose January 8, 2012 at 4:29 PM
ညီမစံရဲ့ တစ်နေ့တာလေးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရေးထားတာ သဘောကျမိတယ်။ အစ်မလည်း ရေးပေးပါမယ်နော်။ သတိတရ တက်ဂ်တဲ့ ညီမစံကိုရော၊ ဒီတက်ဂ်ပို့စ်လေး အစပြု ဖြစ်တည်ရာ ညီမblackroze ကိုပါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အရင်ပြောပါရစေ...။
သမီးစံ January 8, 2012 at 6:24 PM
မောင်မောင် January 8, 2012 at 9:01 PM
အစ်မစံရေ ကောင်လေး မြန်မြန်ရှာဗျို. အစ်မအစားအားငယ်လာပီ။ ရေကူးတာများ သန်လျင်မြစ်ထည်းသွားကူးပေါ. ဟိဟိ
8Yar January 9, 2012 at 10:26 AM
စစချင်းတစ်ခါပဲ သားနာမည်ပါမယ် ထင်တာ။ အောက်ဆုံးရောက်တော့ ထပ်ပါလာတယ်။ အဟင့် လူကိုတက်စာကျွေးတယ် လူဆိုး။ :P ဟီး.. နောက်တာ သတိတရလေး Tag ပေးလိုကျေးကျေးပါ သမံစီးရေ။ သမံစီးရဲ့ တစ်နေ့တာ လေးကို ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။
Nandar January 9, 2012 at 8:36 PM
တစ်နေ့တာလေး လာဖတ်သွားပါတယ်။ ပြန်လာလည်ဦးနော်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) January 10, 2012 at 1:31 AM
ယုံကြည့်ရတဲ့ သူစိမ်း မရှိသေးတဲ့
မယုံပါဘူးအေ.. ဘယ်နားဖွက်ထားတုန်း မှန်မှန်ပြောပါ..
သူက သူများတွေကို ထပ်တဂ်ထားပြန်ပြီ.. တော်တော်တဂ်ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးး)
ဒါနဲ့ မဲနေတဲ့အသား ပြာသွားမှာကြောက်ရင် ရေကူးနည်းသစ်တစ်မျိုး ပေးချင်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံးကို ပလပ်စတစ် လုံအောင်စွပ်ပြီးမှ ကူးပါလေ...
ဒါဆို ပိုပီး ဖြူလာပါလိမ့်မယ်။။း)
ချယ်ရီမြေ January 10, 2012 at 1:46 AM
သမီးစံေ၇.... ခရိးကပြန်ရောက်ချင်း အလည်ေ၇ာက်လာတယ်..။ နေကောင်းတယ်နော်...။ သမီးစံရဲ့ တစ်နေ့တာအတွက် အင်တာဗျူးကဏ္ဍလေး ဖတ်သွားတယ်..။ တစ်နေ့တာ ဖြစ်သန်းသမျှအားလုံး အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
mabaydar January 10, 2012 at 8:15 AM
ဟေ... ဒီကလေးမ တက်စာကျွေးပြီး အကြောင်းလဲမကြားဘူး...
ဒီဟာတော့ ရီရတယ်... :) သတိတရတက်တဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်...
ဒုတ်ိယလူ January 10, 2012 at 7:33 PM
အမစံ ရေ လာရောက် ဖတ်ရှု ..
ဖြေထား တာ ပျော်စရာကြီးပဲ.. နော်
mstint January 12, 2012 at 12:04 AM
ကြည်နူးစရာ တစ်နေ့တာတဂ်ပို့စ်လေး ဖတ်သွားပြီ သမီးစံရေ။
တီတင့်ဆီလာခဲ့နော် Spa ဖွင့်ထားတယ်း))
သဒ္ဓါလှိုင်း January 12, 2012 at 10:09 AM
ခုမှလာဖတ်ဖြစ်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါသမီးစံရေ။ ခင်ခင်မင်မင်တဂ်ထားတဲ့အတွက် ဝမ်းသာတယ်နော်။
ဒါနဲ့ ဝမ်းနည်းမှုအသေးအကြီးဆိုတော့ တံတားပေါ်သွားတာက ဝမ်းနည်းမှုအကြီးလားသမီးစံ. စိုးရိမ်လိုက်တာနော်း)) ရေးကူးဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီးမှတော့ သွားပါ။
♫♪★လွမ်းပိုင်ရှင်★♪♫ January 12, 2012 at 5:52 PM
တစ်နေ့တာ တဂ်ခဲ့ပါတယ်နော် ဒေါသတွေလည်းပြေလောက်ရောပေါ့နော်
Anonymous January 16, 2012 at 6:42 AM